အသစ် - Serpenti Seduttori Tourbillon - မြင့်မားသောရတနာအိပ်မက်
Bulgari နာရီများ နာရီ
အသစ်: Serpenti Seduttori Tourbillon
Bvlgari တစ်ယောက်တည်းလုပ်နိုင်သလိုစျေးကွက်ထဲမှာအသေးငယ်ဆုံးအမျိုးသမီး tourbillon
ဇန်နဝါရီလ 19, 2020
Bvlgari သည်ဘယ်တော့မှမအံ့သြသင့်ပါ။ LVMH Watch Week Dubai တွင်ရိုမေးနီးယား Jeweller ၏ထင်ရှားသောထင်ရှားသည့်အချက်မှာ Serpenti Seduttori နာရီတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအသေးဆုံး tourbillon ၏ပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်မနှစ်က Bvlgari ၏ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်ခဲ့သည် Serpenti Seduttori နာရီ reimagined အိုင်ကွန်ဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
Bvlgari Serpenti Seduttori စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့။
Bvlgari ကသူ့ဟာသူသတ်မှတ်ပါတယ် အချိန်ရတနာနှင့်ရွှေရောင်စိန်များဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဤနာရီများသည်အချိန်ကာလ၏စာဖတ်ခြင်းကိုယခင်ကထက် ပို၍ အဖိုးတန်စေသည်။
Bulgari Serpenti Seduttori သည်ရွှေ၊ စိန်၊ သံမဏိ၊ ရွှေနှင့်စိန်များဖြစ်သည်။
LVMH စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပတ်ဒူဘိုင်းဇိမ်ခံအမှတ်တံဆိပ်ကုမ္ပဏီကြီးကပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိကျင်းပခဲ့သည့်ဟိုတယ်စုဆောင်းမှုတွင်အကြီးဆုံးဖြစ်သော Bvlgari Resort Dubai တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဤဖြစ်ရပ်သည်စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်လက်လီအရောင်းဆိုင်များမှအဖွဲ့လိုက်၏တီထွင်မှုများနှင့်မဟာဗျူဟာအသစ်များကိုရှေ့တွင်မဖော်ထုတ်ရန်ပထမဆုံးအခွင့်အလမ်းရရှိခဲ့ကြသောစာနယ်ဇင်းသမားများနှင့်လက်လီရောင်းချသူများကအလွန်တန်ဖိုးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျီနီဗာနာရီနှင့် Wonder နှင့် ဘေဆယ် - လူအများစုကဤအဓိကဖြစ်ရပ်နှစ်ခုသည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုထင်မြင်ကြသည်။
ကင်းမျှော်စင်ရက်စ Serpenti Seduttori Tourbillon အသစ်သည်အမှန်တကယ်ကျောက်မျက်ရတနာတစ်ခုဖြစ်သည်, ဒီဖြစ်ရပ်၏အဓိကမီးမောင်းထိုးပြအဖြစ်တက်ရောက်ခြင်းဖြင့်ကျင်းပခဲ့သည်။
နယူး Serpenti Seduttori Tourbillon
နယူး Bvlgari Serpenti Seduttori Tourbillon နှင်းဆီရွှေ။
ရွေ့လျားမှုစက်မှုလက်စွဲစာအုပ်ဖြင့်လည်ပတ်သည့်စက်ကို Caliber BVL150၊ tourbillon၊ နာရီနှင့်မိနစ်ညွှန်ပြချက်များ၊ နာရီ ၄၀ ပါဝါအရံ၊ ၂၁'၆၀၀ Vph (40Hz)၊ ကျောက်မျက် ၂၃ ခုထုတ်လုပ်သည်။ လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာ: 21mm x 600mm; အထူ: 3mm ။ Case နှင့် 23mm 22kt rose rose ရွှေရောင်အိတ်၊ နံရံကပ်ခေါက်ထားသည့်စိန်များဖြင့်ဆီးနှင်းအပြည့်တပ်ဆင်ထားသည်။ 18kt နှင်းဆီရွှေသရဖူသည် cabochon - ဖြတ်ပတ္တမြား (~ 3.65 ct) ဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဖြစ်ရပ်မှန်အထူ: 34mm ။ ၃၀ မီတာအထိရေခံနိုင်သည်။ တောက်ပသောဖြတ်တောက်ထားသောစိန်များဖြင့်ဆီးနှင်းအပြည့်တပ်ဆင်ပါ။ ကြိုးသိုင်းကြိုးအညိုရောင်ပတ်ပတ်လည်တောက်ပသောဖြတ်စိန်များနှင့်အတူခေါက် Clasp နှင့်အတူမိကျောင်းသိုင်းကြိုး။ စိန်ပေါင်း ၂၉၉ လုံး (~ 18 cts)
ဒါဟာ၏ status ကိုမှမြင့်တက်အသစ်စက်စက်လက်ပတ်နာရီရှိသည်ဖို့အတော်လေးထူးခြားသည် အိုင်ကွန် ထက်နည်းတစ်နှစ်အတွက်။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးမှုကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ရန် ပို၍ ပင်ထူးခြားသည်။
ရောမ Jeweler ကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ့်ကိုထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့အတူပျက်စီးစေခဲ့ပြီးမှတ်တမ်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးဖဲ့ခဲ့ပြီး Serpenti Seduttori Tourbillon ဟာချွင်းချက်မရှိပါ။
ဤစုဆောင်းမှု၏ဖော်ပြချက်အသစ်တွင်အမျိုးသမီးများအတွက်ရှားပါးသော tourbillon ပါဝင်သည် BVL150 caliber.
Bvlgari Serpenti Seduttori Tourbillon Caliber BVL150 ။
ဤသည် caliber, ၎င်း၏withုံအလွန်သေးငယ်သောအချိုးအစားနှင့်အတူ, Bvlgari ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ရတနာအကြားထူးခြားတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားပြုတယ် စက်မှုလက်မှုအတတ်ပညာ.
Calibre ၏ဒီဇိုင်းသည်ကြီးမားသောစက်မှုအောင်မြင်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်အသေးငယ်ဆုံးသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။
Bvlgari Serpenti Seduttori Tourbillon - လှုပ်ရှားမှုပုံကြမ်း။
ဤအသစ်နှင့်အခြေခံကျသောလှုပ်ရှားမှုသည်လက်ပတ်နာရီနှင့်အံ ၀ င်ခွင်ကျဖြစ်နေသည်။ ၎င်းသည်ရိုဒီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော၊ လက်ဖြင့်အလှဆင်ထားသောကုတ်ဒီဂျနီဗာ၊ Perlage နှင့် beveling နှင့်နီလာတံတားတစ်ခုတပ်ထားသည်။
ထို့ကြောင့် Tourbillon မော်ဒယ်သည်ဗေဒ၏အစေခံများဖြစ်သောနည်းပညာစွမ်းရည်များအတွက်ကောင်းမွန်သောနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
နှင်းဆီနှင့်စိန်သို့မဟုတ်ရွှေဖြူနှင့်သားရေကြိုးဖြင့်စိန်များဖြင့် Bulgari Serpenti Seduttori Tourbillon ။
Bvlgari Serpenti Seduttori Tourbillon သည်ရွှေဖြူ၊ စိန်နှင့်အဖြူရောင်ရွှေလက်ကောက်များဖြင့်စိန်ခင်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
တစ်ခုလုံး Serpenti Seduttori နောက်ဆုံးပေါ်အပါအဝင်စုဆောင်းခြင်း Tourbillon မော်ဒယ်လ်သည် Maison အမှတ်တံဆိပ်ကုဒ်များကိုအပြည့်အ ၀ လေးစားတန်ဖိုးထားသည့်ရတနာနာရီများဖြစ်သည်။
Tags:bulgari • Bulgari ရိုးမား • နာရီ
မှတ်ချက်0ခုအသစ်: Serpenti Seduttori Tourbillon"